Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.4.2 PhotoCity
Iiwebhusayithi ezifana neFlickr ne-Facebook zivumela abantu ukuba babelane ngemifanekiso kunye nabahlobo kunye nosapho babo, kwaye badala iifostile ezinkulu zeefoto ezingasetyenziselwa ezinye iinjongo. Ngokomzekelo, uSameer Agarwal kunye noogxa (2011) bazama ukusebenzisa le zithombe ukuba "Bakhe iRoma Ngosuku" ngokuphindaphinda imifanekiso eyi-150 000 yaseRoma ukudala i-3D yokwakhiwa kwakhona kwesi sixeko. Kwezinye izakhiwo ezithandekayo-ezifana neColiseum (umzobo 5.10) -uphando baphumelela ngempumelelo, kodwa ukulungiswa kwakhona kwezinto ngenxa yokuba ezininzi iifoto zithathwe kwimizobo yeefayile ezifanayo, zishiya izabelo zezakhiwo zingabonakali. Ngaloo ndlela, imifanekiso evela kwiifowuni zokugcina ayifanele. Kuthekani ukuba ngaba iivolontiya zingabhalwa ukuqokelela iifoto ezifunekayo ukuze zicebise abo sele bekhona? Ukucinga emva kobugcisa obufana nesahluko 1, kuthekani ukuba iimifanekiso ezilungele ukulungiswa yimifanekiso yesikhumba?
Umzobo 5.10: Ukwakhiwa kwakhona kwe-3D ye-Coliseum ukusuka kwisiseko esikhulu seemifanekiso ezi-2D ezivela kwiprojekthi "Ukwakha iRoma ngomhla." Iinqununu zimelela indawo apho iifoto zithathwe khona. Ikhutshwe ngemvume evela kwi-html inguqu ye- Agarwal et al. (2011) .
Ukuze kulungiselelwe ukuqokelelwa kweenombolo ezininzi zeefoto, uKathleen Tuite kunye noogxa bakhe bathuthukise i-PhotoCity, umdlalo wokulayisha isithombe. I-PhotoCity yajika umsebenzi onobunzima wokuqokelela idatha-ukulayisha iifoto-zibe ngumsebenzi ofana nomdlalo obandakanya amaqela, iinqaba, kunye neeflegi (umfanekiso 5.11), kwaye okokuqala kwasungulwa ukudala i-3D yokwakhiwa kwamanyunivesithi amabini: iYunivesithi yaseConell neYunivesithi waseWashington. Abaphandi baqalise inkqubo ngokulayisha iifoto zezityalo kwizakhiwo ezithile. Emva koko, abadlali kwikampus nganye bahlolisisa imeko yangoku yokuvuselela kunye namacebo athola ngokulayisha imifanekiso eya phucula ukuhlaziywa kwakhona. Ngokomzekelo, ukuba ukuhlaziywa kwangoku kweeLibrari ze-Uris (e-Cornell) kwakunzima kakhulu, umdlali angafumana amaphupha ngokulayisha imifanekiso emitsha yalo. Iinkalo ezimbini kule nkqubo yokulayisha zibaluleke kakhulu. Okokuqala, inani lamaphuzu afunyanwa ngumdlali lisekelwe kwisixa esithombeni sabo esongeziweyo ekuhlaziyweni kwakhona. Okwesibini, iifoto ezilayishiwe zafuneka zigqitywe ngokutsha kwakhona ukuze ziqinisekiswe. Ekugqibeleni, abaphandi bakwazi ukudala imodeli ephakamileyo ye-3D yezakhiwo kwiinkampu zombini (umfanekiso 5.12).
Umzobo 5.11: I-PhotoCity yajika umsebenzi onzima wokuqokelela idatha (okt, ukulayisha iifoto) kwaye uyijika ibe ngumdlalo. Ikhutshwe ngemvume evela Tuite et al. (2011) , isiqendu 2.
Umzobo 5.12: Umdlalo we-PhotoCity wanika abaphandi nabathathi-nxaxheba ukudala imodeli ephezulu yeZakhiwo ze-3D basebenzisa iifoto ezilayishwe ngabathathi-nxaxheba. Ikhutshwe ngemvume evela Tuite et al. (2011) , isiqendu 8.
Uyilo lwe-PhotoCity lucombulula iingxaki ezimbini ezivame ukuvela ekuqokelelelweni kwedatha: ukuqinisekiswa kwedatha kunye nesampulu. Okokuqala, iifoto zaqinisekiswa ngokuzifanisa nezithombe zangaphambilini, eziye zafaniswa nezithombe zangaphambili yonke indlela eya kwiifoto zezityalo ezazilayishwe ngabaphandi. Ngamanye amagama, ngenxa yolu luhlu olwakhelwe ngaphakathi, kwakunzima ukuba umntu alayishe isithombe sakhiwo esingalunganga, mhlawumbi ngengozi okanye ngenjongo. Olu hlobo lwakhiwo lithetha ukuba inkqubo iyazikhusela ngokuchanekileyo kwiinkcukacha ezimbi. Okwesibini, inkqubo yokunika amanqaku abaqeshwe ngokuqhelekileyo ukuba baqokelele eyona nto ibalulekileyo-kungeyona idatha elula kakhulu. Ewe, nantsi ezinye zezicwangciso abadlali abachazayo basebenzisa ukuze bafumane amanqaku amaninzi, okulingana nokuqokelela idatha ebalulekileyo (Tuite et al. 2011) :
Ezi nkcazo zibonisa ukuba xa abathathi-nxaxheba banikezelwa ngempendulo efanelekileyo, bangaba ngcali ekuqokelelele idatha yolwazi kubaphandi.
Ngokubanzi, iprojekthi yePhotoCity ibonisa ukuba isampuli kunye nobungakanani bwedatha azinalo iingxaki ezingenakunakunokuzithengiswa ekuqokelelwa kwedatha. Ukongezelela, kubonisa ukuba iiprojekthi zokuqokelela iifayile azixhomeke kwimisebenzi abantu esele bayenzayo nangoko, njengokujonga iintaka. Ngoyilo olufanelekileyo, amavolontiya angakhuthazwa ukuba enze ezinye izinto nazo.